BBC Somali - Ka Qayb Gal - Falanqeynta Jimcaha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Maarso, 2012, 13:18 GMT 16:18 SGA
16:00 Intaas ha inoo joogto maanta ilaa Jimcaha soo socda iyo barnaamijka Falanqaynta Jimcaha ee todobaadka dambe.
15:59 Cabdulqaadir Xassan oo Denmark Joogo waxay la tahay in cayaaruhu sii socon doonaan.
15:58 Jamaal Cusmaan oo ka hadlaya badalaadda mas'uuliyiintii qaraxa ku dhimatay ee sport-ga waxay la tahay in ay dhici doono inkasto inta badan la isku qabqabsado maamulka cayaaraha.
15:56 Cali Xaashi wuxuu yiri maalin mugdi ah ayay u tahay isboortiga Soomaaliya.
15:55 Jamaal Cusmaan sababta loo soo celin yahay dadkii khibradda lahaa in ay tahay ciidamada ajnabiga in ay yihiin oo aan ogolaanayn dadka khibradda leh oo ay ka baqayaan.
15:54 Dowladdu waa in ay u yeerto dadka horay uga shaqayn jiray amniga.
15:53 Wacyigalin ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri Cali Xaashi.
15:52 Askari aan sadex bilood mushaar qaadan amni ma sugi karo ayuu yiri Cabdulqaadir.
15:50 Cabdulqaadir Xassan waxay la tahay ragii hore ee khibradda u lahaa sugidda amniga ee dowladihii hore la howlgaliyo.
15:49 Dhagayste kale oo facebook nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay in qaraxyadii hore ay dowladda cashar ku qaadato ayay ahayd mana ku qaadan, dhagayste kale wuxuu yiri amniga Muqdisho si naba la isuguma halayn karo hadda.
15:47 Dhagaystayaasha Facebook: waxay so jeedinayaan fikrado kala duwan, qaar ayaa dowladda ammaanaya, qaar waxay ka xun yihiin wixii dhacay, qaar waxay leeyihiin dowladda ayaa amniga in ay sugto looga baahnaa oo way ka soo bixi waysay mas'uuliyadeedii.
15:46 Cali Xaashi waxay la tahay cayaaraha in ay u baahan yihiin madaxda oo kale ay koobabka bixiyaan oo aan cayaaraha iyo siyaasadaha la kala soocin.
15:45 Cali Xaashi, runtu waxay tahay in la raadiyo oo la keeno qalabka wax lagu baaro si ammaanka loo sugo.
15:42 Jamaal Cusmaan ma aaminsana in al_Shabaab ay dad shacab ah oo meel jooga raadsanayaan.
15:40 al-Shabaab waxay eegtaan in ay dad aad u badan dilaan, ayuu leeyahay Cabdulqaadir Xassan.
15:39 Dadkii dhintay mas'uuliyadooda iyagaa qaadanaya, ayuu leeyahay Cabdulqaadir.
15:39 Cabdulqaadir Xassan wuxuu ku sugan yahay Denmark, waxaa uu yiri mas'iiliyadda ugu horaysa ee dadka la laayay dowladda ayaa leh.
15:38 Machine dadka lagu baaro wax wayn ma soo kordhinayo ayuu leeyahay Jamaal.
15:37 Sports-ga iyo siyaasadda ha la kala sooco ayuu leeyihin Jamaal Cismaan.
15:36 Jamaal Muxumed Cusmaan, Amniga guud waxaa gacanta ku haya ciidamada Africa.
15:35 Ayaan Cumar, waxay leedahay dumarka aad loo baaro, boorsooyinka, telefoonada iyo si buuxda loo baaro oo qalabka baaritaanka ay la yimaadaan.
15:34 Weerarku ma ahayn mid loola dan lahaa bahda cayaaraha iyo goob cayaareed loola beegtay, ayuu yiri Maxamed Buube.
15:33 Maxamed Buube, wuxuu leeyahay sports-ga waa in aan la joojin si dhalinyaradii iyo cayaarihii loo hantiyo oo koobab ha la qabto.
15:32 Maxamed Buube oo ka mid ah abaabulayaasha cayaaraha oo degan London, anagoo nabad la'aan ah ayaa howsha la waday, calanka meel kasta waa la gayn jiray ayuu yiri.
15:31 Rag tuute watay ayaa na baaray oo aan filayo in ay yihiin military, balse booliiska ayaa iska leh sugidda amniga gudaha oo loo tababaray.
15:31 Ahmed Cabdinuur ayaa waydiiyay in military-ga amniga sugaya uu xal yahay iyo in kale?
15:30 Dad yaqaanna dowladda ha u dirto sugidda amniga, ayuu yiri Cali Xaashi.
15:30 Wuxuu kula talinayaa dowladda in laba maalmood ka hor in la sii baaro goobaha ay madaxdu tagayso isla markaana aan loo ogolaan dadka in ay galaan baarid la'aan.
15:28 Cali Xaashi, oo horay uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka, balse aan hadda ciidan dowlad uusan ka tirsanayn.
15:27 Shiine Guhaad wuu ku raacsan yahay in loo dhabar adaygo dhibaatada iyo qaraxyada oo dalka wax loo qabto.
15:25 Maka waxay intaas ku dartay in loo baahan yahay in aan loo dhutin oo aan qaraxaas lagu niyad jabin.
15:24 Maka Muuse oo markii ugu horaysay abid tagta Muqdisho, waxay leedahay Muqdisho way ka noqol fiican tahay magaalada London siiba dhinaca wada-noolaashaha iyo dad jacaylka.
15:22 Aadan Xaaji Yabarow Wiish iyo Siciid Mugambe, naxdin ayay nagu noqotay aabaheen geeridiisa. ayuu yiri Shiine Guhaad.
15:20 Shiine Guhaad wuxuu ka mid yahay bahda cayaaraha, sugidda amniga Muqdisho wuxuu u baahan yahay qalab gaar ah oo dadka lagu baaro, ma aha in la isku haleeyo gacanta in la isku fatasho.
15:18 Dhalinyarada laga rajo qabo in ay ka soo qaybgalaan London Olympic 2012 xaalad adag ayay ku tababartaa ayuu yiri Jamaal Muxumed Cismaan.
15:17 Jamaal Muxumed Cismaan oo ah weriye la shaqeeya Channel 4, oo dhowaan Muqdisho tagay, wuxuu leeyahay amniga guud wuu soo hagaagayaa, balse ay adag tahay in amnigaas la sii hayo inta xasilooni buuxda dalka ku soo laabanayo.
15:16 "Rag qiime leh ayaa naga baxay" Axmed Sheel.
15:13 Ahmed Shell, oo bahdii cayaaraha Soomaaliya ee dhinaca maamulka, wuxuu ku talinayaa ilaa xaaladda caasimadda loo hanto aan dadka meel la isugu keenin.
15:12 Amniga ayuu Cali Xaashi sheegay in ay amniga sugayeen military-ga iyo ciidamada sida gaarka ah u ilaaliya Tiyaatarka qaranka.
15:11 Dumarka iyo ragga iyo saxaafaddu goobo kala duwan ayay fadhiyeen ayuu yiri Cali Xaashi.
15:09 Cali Xaashi wuxuu sheegay in maalintaas ragga si xoog leh loo baarayay, balse uusan arag dumar maalintaas dumarka baaraysay.
15:08 Cali Xaashi oo ku sugnaa goobta qaraxa, waxaa ku tilmaamay maalintii Arbacada ee qaraxu dhacay maalin madow oo taariikhda saxaafadda iyo cayaaraha soo martay.
15:07 Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Abdiweli maxamed Cali iyo Booliiskuba waxay sheegeen in ay haweeney is qarxisay balse al-Shabab waxay tiri bomb ayaan goobta sii galinay.
15:05 Qaraxii Arbacadii wuxuu dhacay iyadoo la xusayo sanadguuradii 1-aad ee markii dib loo aasaasay Telefishinka Qaranka Soomaaliya. Waxaa xafladdu ka dhacaysa Tiyaatarka Muqdisho.
15:04 Waxaad ra'yigiina ku dhiiban kartaa facebook iyo intiinii nasiib u hesha in telefoon ay barnaamijka kaga qaybgalaan.
15:04 Jamaal Muxumed Cismaan ayaa ka mid ah martida ku sugan Istuudiyaha.
15:00 Xaaladda Ammaanka Muqdisho iyo qaraxii todobaadkan ay naftooda ku waayeen madaxdii ugu saraysay cayaaraha Soomaaliya. Axmed Cabdinur ayaa barnaamijka soo jeedinaya.
15:00 Waxaa uu Barnaamijka Falanqayntu maanta ku saabsan yahay Aminga magaalada Muqdisho kadib qaraxii tiyaartarka qaranka Soomaaliya ee Muqdisho.
14:53 Falanqeynta jimcaha ayaa goor dhow hawada soo geleysa.